အမေးအဖြေများ - Cannapresso ကျန်းမာရေး Inc မှ
CBD လျှော်ခြင်းနှင့်ဆေးခြောက်ကနေဆင်းသက်လာနိုင်ပါသည်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ CBD အားလုံး 50 ပြည်နယ်များအတွက်ဥပဒေရေးရာဖြစ်သည့်သဘာဝအလျောက်, စက်ရုံ-based လျှော်, ကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ လျှော်နေဆင်းသက်လာ CBD THC အတွက်ဆေးဖက်ဝင်နှင့်ကုထုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုကြွယ်ဝနှင့်သဘာဝနိမ့်သည်။
1. စက်ရုံ Difference
1) a.Hemp အထိ 15 ပေရှည်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ရှည်လျားသောဧရာမရိုးရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အငြိမ့်နီးကပ်စွာအတူတကွထုပ်ပိုးထားသည်။
2) ။ ဆေးခြောက်မရှိသလောက်5ပေအမြင့်ထက်ကျော်လွန်နှင့်ပိုပြီးအရွက်များနှင့်ဘူးသီးနှင့်အတူအပြင်ကြီးထွားလာစီအပင်ကြီးထွားဖို့အာကာသလိုအပ်ပါတယ်။
ဆေးခြောက်များနှင့်လျှော်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်, cannabinoids နှစ်မျိုးထွက်မတ်တပ်ရပ်: Tetrahydrocannabinol (THC) & Cannabidiol (CBD)
1) လျှော် 0.05-1% အကြားပျမ်းမျှအားအကြောင်းအရာနှင့်အတူ, မှာအားလုံးအနိုင်နိုင်ဆို THC ရှိပါတယ်။ လျှော်ပျမ်းမျှဆေးခြောက်စက်ရုံထက်ပို CBD ပါရှိသည်။
2) ပျမ်းမျှဆေးခြောက်စက်ရုံ၏ပန်းပွင့် 10-14% ၏ THC အဆင့်ဆင့်ဆံ့။
2) ဆေးခြောက်သုံးခြင်းကရေနံ 50-60% THC, 10-15% CBD ပါရှိသည်။
တစ်ဦးချင်းစီဆီ 4. အသုံးပြုခြင်း
များသောအားဖြင့်, အသားအရေစိုပြေလျှော့ပေါ့ soothing, အေးဆေးအတှကျအသုံးပွုမြင့်မားသော CBD, အနိမ့် THC အကြောင်းအရာနှင့် 1) လျှော်, ။
များသောအားဖြင့်အပန်းဖြေခြင်းနှင့် psychoactive အတှကျအသုံးပွုမြင့်မားသော THC, အနိမ့် CBD အကြောင်းအရာနှင့်အတူ 2) ဆေးခြောက်, ။
CBD, cannabidiol များအတွက်ရေတို, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်များအများအပြား cannabises တာဝန်ရှိသည်ဆေးခြောက်များတွင် non-psychoactive ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, "မြင့်" ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်း tetrahydrocannabinol, ဆေးခြောက်များတွင် psychoactive ဝင်း, အတိုကောက် THC, ဆေးခြောက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ဆက်နွယ်သူတို့ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကိုတစ်လူတန်းစားနေသောနှစ်ခုလုံးဝသီးခြား cannabinoids ဖြစ်ကြသည်။
THC ဖြစ်ကောင်းဆေးခြောက်ထဲတွင် psychoactive ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးလူသိများသည်။ CBD သို့သျော, Non-psychoactive ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် CBD သငျသညျမွငျ့မားမရနိုင်ပါ။ အပန်းဖြေအသုံးပြုသူများ disappointing နေစဉ်, CBD ၏ဤထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဆေးဝါးအဖြစ်ကဒါနှစ်သက်ဖွယ်စေသည်အရာဖြစ်တယ်။
ဆရာဝန်များအများအားဖြင့်ဆေးဝါးကုသမှုဆေးခြောက်များ၏လက်ခံမှုဖို့အဓိကအတားအဆီးဖြစ်သည့်အနည်းငယ်မျှသာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူကုသမှုကြိုက်တတ်တဲ့။ အလားတူပင် CBD အမျိုးမျိုးသောဝေဒနာတွေနှင့်အတူအသက်ငယ်ကလေးများကုသရန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
THC တချို့လူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်အကြောက်လွန်ရောဂါခံစားရစေရန်လူသိများသည်။ သို့သော် CBD ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်နေသည်။ တကယ်တော့, လေ့လာမှုများ CBD THC ingesting ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်တန်ပြန်ဖို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဖော်ပြသည်။ လေ့လာမှုအတော်များများလည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါ CBD စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Non-psychoactive ဖြစ်ခြင်းအပြင်, CBD antipsychotic ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။ သုတေသီများ CBD THC ၏စိတ္တကဲ့သို့သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်လည်းမြင့်မားလာပြီထံမှဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများကပရောဂျက်စေခြင်းငှါယုံကြည်ပါတယ်။ သို့သော် THC ၏စိတျ-ALTER လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိ CBD အတှကျကောငျးကြောင်းအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တွင်, CBD schizophrenia နှင့်အတူလူများအတွက် antipsychotic ဆေးဝါးအဖြစ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
ဆေးခြောက်အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုတစ်ခုမှာတစ်ဦးအိပ်စက်ခြင်းအကူအညီကဲ့သို့ဖြစ်၏။ THC ဆေးခြောက်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်း-inducing သက်ရောက်မှုအများစုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ဟုယုံကြည်နေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လေ့လာမှုများ CBD CBD တစ်အိပ်ပျော်ခြင်းဆေးဝါးအဖြစ်ဆင်းရဲသားရွေးချယ်မှုအောင်နိုးနိုးကွားကွားမြှင့်တင်ရန်ပြုမူအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဆေးခြောက်အချို့မျိုးကွဲအခြားသူတွေစွမ်းအင်မြှင့်တင်ရန်လူသိများနေစဉ်အသုံးပြုသူများအငိုက်ခံစားရစေအဘယ်ကြောင့်အိပ်စက်မှုအပေါ် CBD နှင့် THC ၏ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။
အများဆုံးနိုင်ငံများဆေးခြောက်နှင့် THC ပတျဝနျးကငျြတင်းကျပ်သောဥပဒေများရှိနေစဉ်, CBD ၏ဥပဒေရေးရာ status ကိုလျော့နည်းရှင်းပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ CBD ကဖက်ဒရယ်ဥပဒေအောက်တွင်တစ်ဦးဇယားငါမူးယစ်ဆေးအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကနည်းပညာပိုင်းတရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ Epidiolex ကိုခေါ် CBD ၏တစ်ဦးကဆေးဝါးပုံစံ, သာမကြာသေးမီကအကြီးအကျယ်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်အတူသားသမီးများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးမှ FDA ကများကရှင်းလင်းခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, CBD တရားဝင်အချို့ကုမ္ပဏီတွေကလျှော်ထုတ်လုပ်သည်အဘယ်မှာရှိအခြားနိုင်ငံများမှ High-CBD လျှော်ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူတင်သွင်းဖွငျ့ဤကွက်၏အားသာချက်ယူကြပြီ US မှာတင်သွင်းရောင်းချနိုင်သည့်လျှော်, တွေ့ရပါသည်။
လျှော် CBD နှင့်ဆေးခြောက် CBD အကြားမည်သည့်ကွာခြားချက်ရှိပါသလား?
"CBD ကနေကြွလာဘယ်မှာ CBD-ဒါဟာအရေးမပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ "
ဟုတ်ကဲ့ကကိစ္စမရှိ။ အချို့သောစက်မှုလျှော်မျိုးကွဲအပွင့်-ထိပ်နဲ့အရွက် CBD ၏အလားအလာအရင်းအမြစ် (ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များသညျး) ဖြစ်နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လျှော်ခြင်းမရှိနည်းလမ်းဖြင့် cannabidiol တစ်ဦးအကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှုလျှော်ပုံမှန်အား CBD-ကြွယ်ဝသောဆေးခြောက်ထက်ဝေးလျော့နည်း cannabidiol ပါရှိသည်။ စက်မှုဇုန်လျှော်၏ကြီးမားသောပမာဏလျှော်မြေဆီမိုးသည်းထန်စွာသတ္တုဆွဲယူတဲ့ "ဇီဝစုဆောင်းခြင်း" ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားဖြင့်အဆိပ်သင့်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်, CBD ၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကို extract ရန်လိုအပ်သည်။ စက်မှုဇုန်လျှော်နေတဲ့ Lab ထဲမှာဖန်တီးသို့မဟုတ်ထုတ်ယူ ရောက်. စုံစမ်း single-မော်လီကျူး CBD ဆေးခြောက်ဗီဇမှာတွေ့ရှိအရေးပါဆေးဖက်ဝင် terpenes နှင့်အလယ်တန်း cannabinoids ကင်းမဲ့။ ဤရွေ့ကားဒြပ်ပေါင်းများဟာသူတို့ရဲ့ကုထုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုမြှင့်တင်ရန် CBD နှင့် THC နှင့်အတူအပြန်အလှန်။
CBD (cannabidiol) ၏တရားဝင်မှုအဘို့, အကြီးမားဆုံးကွာခြားချက် THC အဆင့်အထိဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးခြောက်ပင်များ THC ဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားနေစဉ်, လျှော်မပို 0.3 ထက်% THC င်ခြင်း, psychoactive ဓာတု၏အနည်းငယ်သာပါရှိသည်။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်အရှိဆုံးဆေးခြောက်ထံမှလျှော်ခွဲခြားရန်အပေါ်အားကိုးတယျ။
2013 ခုနှစ်စက်မှုဇုန်လျှော်စိုက်ပျိုးရေးအက်ဥပဒေ - ထိုထိန်းချုပ်ထားပစ္စည်းဥစ္စာ၏အဓိပ်ပါယျကနေစက်မှုဇုန်လျှော်ထုတ်ပယ်ဖို့ဥပဒေ Amends "ဆေးခြောက်။ " သွေ့ခြောက်သောအလေးချိန်အခြေခံပေါ်မှာမပို 0.3 ထက်ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကိုး tetrahydrocannabinol အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကြီးထွားလာဖြစ်စေမ, စက်ရုံဆေးခြောက် sativa L. နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစက်ရုံ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုဆိုလိုဖို့ "စက်မှုဇုန်လျှော်" အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဆေးခြောက် sativa အယ်လ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပြည်နယ်ဥပဒေနှင့်အညီစက်မှုလျှော်အောင်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကြောင့်ကြီးထွားလာသို့မဟုတ် process လုပ်တယ်လျှင်အာရုံစူးစိုက်မှုန့်သတ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ယူဆ။
DEA: "[အဆိုပါနည်းဥပဒေ] ၌တည်အသစ်မူးယစ်ဆေးကုဒ် (7350) ကိုထိန်းချုပ်ထားတ္ထုများအက်ဥပဒေ (CSA) တွင်ထွက် set ဆေးခြောက်၏အဓိပ်ပါယျကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်မပါဝင်ပါဘူး။ အသစ်မူးယစ်ဆေးကုဒ်ဆေးခြောက်၏ CSA ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အတွင်းလဲကျကြောင်းသူတို့သာကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူပါဝင်သည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်းကိုသာဆေးခြောက်၏ CSA ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မှဖယ်ထုတ်လိုက်သည့်ဆေးခြောက်စက်ရုံ၏အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်ဆိုပါကထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန် "(7360) ကိုအသစ်သောမူးယစ်ဆေးကုဒ် (7350) တွင်သို့မဟုတ်ဆေးခြောက်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးကုဒ်တွင်ထည့်သွင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူး
CBD (cannabidiol) ဆေးပညာဆေးခြောက်များတွင်ပေမယ် THC များ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲတွေ့ရှိခဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုအပြည့်အဝ spectrum ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ လက်တွေ့ setting တွင် CBD, ကင်ဆာရောဂါကုသကူညီတက်ခြင်း, ရောင်ရမ်းခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်, ပျို့, စိတ်ဖိစီးမှု, အောက်ပိုင်းသွေးပေါင်ချိန်, ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အများအပြားပိုပြီးကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှသက်သာရာရစေရန်ပြသလျက်ရှိသည်။ တချို့ကအစီရင်ခံစာများ CBD ၏အမြင့်ဆုံးပြင်းအားအမှန်တကယ် THC ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမြှင့်တင်ရန်နိုင်သည်ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ CBD ၏သက်ရောက်မှုအဖြစ်တောင်းဆိုမှုများ, Cannabidiol ရေနံ, သို့မဟုတ်လျှော် CBD ရေနံလုပ်မပေးနိုငျနေချိန်မှာကျနော်တို့ထောက်ခံသူများဖြစ်ကြပြီး CBD ၏အကျိုးကျေးဇူးများများအတွက်လွတ်လပ်စွာရှာဖွေအကြံပြုပါသည်။
ငါ CBD မှ "မြင့်သော" get ကြမည်နည်း
လျှော်လူ့ခန္ဓာကိုယ်သဘာဝကျကျထုတ်လုပ်ရန်ဘူး, အစားအသောက်များတွင်အားဖြင့်စားသုံးရမည်ဖြစ်သည်ကြောင်းမရှိမဖြစ်ဖက်တီးအက်ဆစ်ကိုခေါ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရအစိတ်အပိုင်းများသည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ nutitional တန်ဖိုးကိုပါရှိသည်။ ထို့ပြင်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနထွန်းသစ်စယေဘုယျသုခချမ်းသာမှုအတွက်လျှော်ရေနံကနေ CBD ၏စားသုံးမှုကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ကျန်းမာသငျသညျစောင့်ရှောက်, ဒါပေမယ့် "အမြင့်ဆုံး" သင်ရပါဘူး။ လျှော်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲနှင့်အစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောမသာ, စက်ရုံနီးပါးတိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု useable ဖြစ်ပါသည် - အစားအစာ, ဖိုင်ဘာ, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများနှင့်လောင်စာအဘို့, ခန့်မှန်းခြေ 25000 အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ။ လျှော် CO2 sequesters နှင့်ရှင်သန်ပေါင်းသတ်ဆေးမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာအစကကိုစိုက်ခင်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေမြေဆီထွက်ခွာမည်။
လုံလောက်အောင်ယူသည့်အခါသူကထိရောက်သောဖြစ်လာဘို့, ကယေဘုယျအားဖြင့်ခန့်သာ 20-30 မိနစ်ခန့်ကြာပါသည်။ လူအများစုဟာအရင်ထွက် စတင်. အခါ, မျှော်လင့်သောအရာကိုသိရန်နှင့်မကြာခဏကသူတို့အခွအေနေကိုကူညီစတင်ကြောင်းစျြလြူမရှုကြဘူး။ အစီရင်ခံရန် no "ဆိုတဲ့မြင့်မားတဲ့" လည်းမရှိကတည်းကလူအများစုကဘာမှလုပ်နေတာကြောင်းမသိရပါဘူး။ သာခဏတစ်အပြီးတွင်သူတို့ခဲ့ကြပေမည်ဆိုနာကျင်မှုမရှိတော့အဲဒီမှာသို့မဟုတ်မအဖြစ်ပြင်းထန်သောကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြပါ။ အဆိုပါ "ခံစားချက်" အများအားဖြင့်, ဖော်ထုတ်ခံရဖို့တတ်နိုင်သောသူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးသိမ်မွေ့ငြိမ်သက်ကြောင်းကိုဒါသိမ်မွေ့သည်။ အတော်ကြာအသုံးပြုမှုပြီးနောက်များစွာသောလူအခုသူတို့ကစီမံခန့်ခွဲပြီးနောက်မိနစ်ချွတ် "အစွန်းယူပြီး" သတိထားမိကြောင်းအစီရင်ခံပါပြီ။ သို့သော်အများစုမှာအသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့, သူတို့တစ်တွေကြီးမားပြောင်းလဲမှုကိုမျှော်လင့်ကြောင်းနာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတှကျအသုံးပွုခံရမယ့်မဟုတ်လျှင်ယင်း၏ဖွင့်, ထိုမကြိုက်ဘူး။ သင့်လျော်သောပမာဏတွင်ဤထုတ်ကုန်ယူပြီးသည့်အခါနာကျင်မှု၏တစ်ဦးကနူးညံ့သိမ်မွေ့လွှတ်ပေးရန်များသောအားဖြင့်တရားမျှတစွာသိသာသည်။
အဆိုပါ Vape ရေနံတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဘယ်လိုငါလာပြီပေါ့ဘယ်လောက် CBD သိရသလဲ
ဘယ်လိုလူအများစုကလည်ကသူတို့လျှော် Vape ရေနံထံအပ်နှံတစ်ခုတည်းသည့်အရာတစ်ခုရှိခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ vape ကလောင်ပေါ်သို့သည့်အရာတစ်ခုကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်နေ့ကိုတလျှောက်လုံးအခါအားလျော်စွာပြုလုပ်အသုံးပြုပါ။ သူတို့ကအသုံးပြုနေသည့် vape ရေနံအတွက် CBD ၏အာရုံစူးစိုက်မှု သိ. အားဖြင့်သူတို့ကဖြည့်တဲ့အခါမှာ CBD သည့်ကျည်တောင့်၌ရှိ၏ဘယ်လောက်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vape ရေနံ vape ဆီ 1.5ml နှုန်း CBD ၏ 25mg ရှိပါတယ်။ 1.5ml တစ်ဦးကျည်တောင့်ဖြည့်မယ့်ဘုံပမာဏ (သို့သော်မသာငွေပမာဏ ..... ဒါကြောင့်သင်အသုံးပြုသည့်ကျည်တောင့်သည်နှင့်အညီချိန်ညှိ) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 100mg 10ml vape ရေနံတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါတစ်စုံတစ်ဦးကို CBD ၏ 20mg ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ, သူတို့တစ်တွေအပြည့်အဝ 2ml သည့်အရာတစ်ခုသူတို့ကအသုံးပြုခဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန် vape လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်, အဆွဲတှငျကငျြးပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးပေါ် မူတည်. လည်း CBD အမှန်တကယ်လူတစ်ဦး၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ရရှိသွားတဲ့ဘယ်လောက်အကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 100mg 1oml ပုလင်း: အဆိုပါ Vape ရေနံ vape ဆီ 1 ml နှုန်း CBD ၏ 10mg ရှိပါတယ်။ သငျသညျ CBD ၏ 10mg ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဥပမာ,, ထို့နောက်သင် 1ml ယူလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 300mg 1oml ပုလင်း: အဆိုပါ Vape ရေနံ vape ဆီ 1 ml နှုန်း CBD ၏ 30mg ရှိပါတယ်။ သငျသညျ CBD ၏ 10mg ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဥပမာ,, ထို့နောက်သင်သည် 1 / 3ml ယူလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 500mg 1oml ပုလင်း: အဆိုပါ Vape ရေနံ vape ဆီ 1 ml နှုန်း CBD ၏ 50mg ရှိပါတယ်။ သငျသညျ CBD ၏ 10mg ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဥပမာ,, ထို့နောက်သင် 0.2ml ယူလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 1000mg 1oml ပုလင်း: အဆိုပါ Vape ရေနံ vape ဆီ 1 ml နှုန်း CBD ၏ 100mg ရှိပါတယ်။ သငျသညျ CBD ၏ 10mg ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဥပမာ,, ထို့နောက်သင် 0.1ml ယူလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 100mg 15ml ပုလင်း: အဆိုပါ Vape ရေနံ vape ဆီ 1 ml နှုန်း CBD ၏ 20 / 3mg ရှိပါတယ်။ သငျသညျ CBD ၏ 10mg ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဥပမာ,, ထို့နောက်သင် 1.5ml ယူလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 300mg 15ml ပုလင်း: အဆိုပါ Vape ရေနံ vape ဆီ 1 ml နှုန်း CBD ၏ 20mg ရှိပါတယ်။ သငျသညျ CBD ၏ 10mg ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဥပမာ,, ထို့နောက်သင် 0.5ml ယူလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 500mg 15ml ပုလင်း: အဆိုပါ Vape ရေနံ vape ဆီ 1 ml နှုန်း CBD ၏ 100 / 3mg ရှိပါတယ်။ သငျသညျ CBD ၏ 10mg ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဥပမာ,, ထို့နောက်သင် 0.3ml ယူလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 1000mg 15ml ပုလင်း: အဆိုပါ Vape ရေနံ vape ဆီ 1 ml နှုန်း CBD ၏ 200 / 3mg ရှိပါတယ်။ သငျသညျ CBD ၏ 10mg ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဥပမာ,, ထို့နောက်သင် 0.15ml ယူလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 100mg 3oml ပုလင်း: အဆိုပါ Vape ရေနံ vape ဆီ 1 ml နှုန်း CBD ၏ 10 / 3mg ရှိပါတယ်။ သငျသညျ CBD ၏ 10mg ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဥပမာ,, ထို့နောက်သင် 3ml ယူလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 300mg 3oml ပုလင်း: အဆိုပါ Vape ရေနံ vape ဆီ 1 ml နှုန်း CBD ၏ 10mg ရှိပါတယ်။ သငျသညျ CBD ၏ 10mg ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဥပမာ,, ထို့နောက်သင် 1ml ယူလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 500mg 3oml ပုလင်း: အဆိုပါ Vape ရေနံ vape ဆီ 1 ml နှုန်း CBD ၏ 50 / 3mg ရှိပါတယ်။ သငျသညျ CBD ၏ 10mg ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဥပမာ,, ထို့နောက်သင် 0.6ml ယူလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 1000mg 3oml ပုလင်း: အဆိုပါ Vape ရေနံ vape ဆီ 1 ml နှုန်း CBD ၏ 100 / 3mg ရှိပါတယ်။ သငျသညျ CBD ၏ 10mg ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဥပမာ,, ထို့နောက်သင် 0.3ml ယူလိမ့်မယ်။
mesh V ကို + ကဘာလဲ?
စိတ်ချစွာငြိမ်ဝပ်စွာနေကျနော်တို့ရောင်းချထုတ်ကုန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို 50 ပြည်နယ်နှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 40 နိုင်ငံများတွင်ဥပဒေရေးရာဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မဆိုဆေးညွှန်းမဟုတ်သလိုဆေးဘက်ကဒ်မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်သည်အခြားတိုင်းပြည်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင့်ဒေသခံဥပဒေများစစ်ဆေးပါ။ ပြည်နယ်အများစုဆေးခြောက်သုံးခြင်းကနေ CBD ရေနံတရားဝင်စတင်ကြပြီ တချို့ပြည်နယ်များကဆင်းမဲပေးခဲ့ကြသည်။ CBD CBD သည်နှင့်အဲဒါကိုထိရောက်သောဖြစ်ဘို့ကဆေးခြောက်သို့မဟုတ်လျှော်မှလာသလားဆိုတာကိုအရေးမပါဘူးဆေးခြောက်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့, ဆေးခြောက်သုံးခြင်းကနေ CBD ရေနံသို့မဟုတ်သင့်ပြည်နယ်ဥပဒေရေးရာမကျမည်အကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ နေစဉ်တွင် ဒါပေမယ့်လျှော်ထံမှ CBD ရေနံမသက်ဆိုင်ဆေးခြောက်များနှင့်ဆေးခြောက် CBD ရေနံပေါ်တွင်သင်၏ပြည်နယ်၏ဥပဒေများ, ရှိသမျှ 50 ပြည်နယ်များအတွက်ဥပဒေ IS ။
ဒီထုတ်ကုန်များ အသုံးပြု. ပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးစမ်းသပ်လွန်သွားတော်မူမည်လော
ကြှနျုပျတို့သညျဤအကွောငျးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့စာမျက်နှာတခုတခုအပေါ်မှာတစ်ခုလုံးကိုဆောင်းပါးရေးထားပြီ။ ကြည့်ရှုရန်အောက်ပါခေါင်းစဉ်ကို click လုပ်ပါ: CBD တစ်စုံတစ်ဦးကမူးယစ်ဆေးဝါး screen ပေါ်မှာ positive စမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်စေသလဲ